Wednesday October 14, 2020 - 21:39:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/hoose ee Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay weerar cagmarin ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka.
Dagaal aad uculus ayaa maanta gelinkii dambe ka dhacay tuulada Bululoow oo kaabiga ku haysa degmada Afgooye, war rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dagaal culus kadib ay xoogagoodu la wareegeen deegaankii lagu dagaallamay.
"Mujaahidiinta ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday Murtadiin isku aruursanayay tuulada Bululoow ee duleedka Afgooye, Alle fadligiis howlgalka guulaystay waxaa lagu dilay 25 askari oo cadowga katirsan gaadiidna waa lagu gubay" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Ilo wareedyo ay SomaliMeMo ka heshay jiidda hore ee dagaalka ayaa sheegaya in sedax sarkaal oo mid kamida uu yahay taliye horin ay ku dhinteen dagaalkii maanta.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Al Shabaab ay dagaalka ku gubeen dhowr gaari oo nuuca Tiknikada ah, Meydadka ciidamadii lagu dilay dagaalkii dhacay gabalkii caawa maqribkii ayaa weli daadsan halkii lagu dagaallamay.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin taliska ciidamada dowladda oo ku saabsan dagaalkan khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay duleedka degmada Afgooye.